Traveller Chan - လှရက်လွန်းပါသော ရန်ကုန်မြို့ထဲက စိန်မေရီ ကာသီဒြယ် Church
Church ကျောင်းအပြင်ဘက်မှာ လှည့်ပတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ကျောင်းကြီးထဲ ဝင်စူးစမ်းမိတယ်။ အထဲရောက်တော့ ရုတ်တရတ် စကားတောင် မပြောနိုင်ဘဲ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားတယ်။ လှချက်များ ဆိုတာလေ… တကယ်ပါ။ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်စေချင်မိတာ။ အထူးသဖြင့် ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးတွေပေါ့။ ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သည့်ထပ်အများကြီး ညွှန်းပြချင်ပေမယ့် ဘာသာခြားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မှားပြောမိမှာလည်း စိုးရိမ်မိတယ်။
သည်ကျောင်းတော်ကြီးကို Bishop Cardot လက်ထက် ၁၈၉၅ခု ဇွန်လမှာ စတင်ပြီး အုတ်မြစ်ချခဲ့တာပါတဲ့။ ၁၈၉၈ခု နိုဝင်ဘာလမှာ ပြင်သစ်ဗိသုကာပညာရှင် Rev. Fr. Janzen ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး လူ ၁၅၀၀ ဝင်ဆန့်တဲ့ Church ကျောင်းကြီးကို ဆောက်လုပ်စေခဲ့တယ်။ ၁၉၀၇ခု သြဂုတ်လ ၁၁ရက်မှာ အခန့်မသင့်စွာဘဲ Fr. Janzan ဟာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း အမြင့်မှ ပြုတ်ကျကာ တင်ပဆုံရိုး ထိခိုက်သွားတယ်။ ထိုဒဏ်ရာကြောင့်ပဲ သူဟာ ဒုက္ခိတဘဝ ရောက်ခဲ့ရရှာတယ်။ ဒါပေမယ့် Fr. Janzan ဟာ သူ့ရဲ့အလုပ်တာဝန်ကို အပြီးသတ်သည်အထိ ညွှန်ကြားကြီးကြပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် Ah Yen Ah Yen ရဲ့ အကူအညီနဲ့ပေါ့။
ကျောင်းတော်ကြီးကို ၁၉၀၉ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့မှာ ကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့မှာ မယ်တော်သခင်မဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဘွဲ့တော်ခံယူလျက် ဘုရားသခင်အား အပ်နှံပူဇော်ပါတယ်တဲ့။ Fr. Janzen ကတော့ ၁၉၁၁ခု သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာတယ်။ သူ့ကို ကျောင်းတော်အတွင်း၏ အဝင်ဝနားလေးမှာ မြှပ်နှံဂုဏ်ပြုပေးထားတယ်။ ပျက်စီးမှု အနေနဲ့ ၁၉၃၀ခု မေလ ၅ရက်နေ့မှာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၄၄ခု ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့မှာ မဟာမိတ်ဗုံးဒဏ်ကြောင့်တစ်ကြိမ် ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အပျက်အစီးတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတာမို့ ခုချိန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် လှလှပပထည်ထည်ဝါဝါနဲ့ ရှိနေမှာပါလို့ ဗဟုသုတ မျှဝေရင်း တော်သေးပြီ။